13 Jun, 2014 - 00:06	 2014-06-12T13:58:47+00:00 2014-06-13T00:00:59+00:00 0 Views
MUCHISHONA tine madimikira anenge ari zvidudziramuiti. Iri ndiro shoko rinotiudza zvizhinji pamusoro pemuiti. Semuenzaniso, “wokuvigwa negonzo” zvichidudza kufa usina mukadzi kana mwana. Dimikira irori rinenge ratodudza zvizhinji pamusoro pemushakabvu. Mumwezve muenzaniso ndeunoti, “mukadzi wokuzvarira pasi” zvichireva kuzvara vana vachifa. Mumwezve ndeunoti, “baba vozvomweya” zvichireva mutungamiri kuchechi.
Heunoi munda wemadimkira akadaro:
1. Wokusabvarura machira — anoroya.
2. Mbuya vasingaridziri tsamwa anoswera — vanoroya zvinotyisa.
3. Vekusada kupfuurwa nemarokwe — murume ane ruchiva.
4. Vokukohwa pavasina kurima — mbavha.
5. Vokukumbira nechemumoyo — mbavha.
6. Mbuya vanomuka — vanoroya.
7. Mukadzi wokupisirwa guva — kuita upombwe mukadzi asati arohwa guva.
8. Ari panyanga — mutungamiri.
9. Vanhu vanovimba nemabvi — vanamati.
10. Ane mukanwa makaumburukwa nechidembo — anotaura zvakashata.